VFX ကို Legion of Honour '' Madam အတွင်းရေးမှူး '' အဘို့အ 100 + VFX ဖန်တီးလိုက်တဲ့ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » VFX ကို Legion of Honour '' Madam အတွင်းရေးမှူး '' အဘို့အ 100 + VFX ဖန်တီးလိုက်တဲ့
VFX ကို Legion of Honour '' Madam အတွင်းရေးမှူး '' အဘို့အ 100 + VFX ဖန်တီးလိုက်တဲ့
အဆိုပါ LA က / ဘီစီ-အခြေပြုကုမ္ပဏီနိုင်ငံရေးပါတီများဒရာမာရဲ့ပဉ္စမရာသီနှင့်ထုတ်လုပ်ပြီးများအတွက်ဖြစ်သော CBS စီးရီးဘို့ထွင်းထုဆုံး Challenger CG Shots အချို့သည်ပြတဲ့ VFX ပြိုကွဲရ Reel ဟာ Visual Effects အားလုံးသည် Created ။
VFX ပြိုကွဲရ ReelL: Madam အတွင်းရေးမှူး ''
VFX Legion မကြာသေးမီက '' Madam အတွင်းရေးမှူးချုပ်။ ', အဆိုပါဖြစ်သော CBS ရဲ့စီးရီး၏ပဉ္စမရာသီများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုထုပ် အဆိုပါ LA ကနှင့်ဘီစီ-based ကုမ္ပဏီရှိုး 30 အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထက်ပိုမှလက်မှုပညာ 100 ကျော်အနုပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စုဝေးရောက်လာကြ၏။ အလုပ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရဲ့ storyline လိပ်စာများကိုပြသသောပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ကြောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှကွန်ပျူတာ-generated အကြီးစားအစိမ်းရောင်ဖန်သားပြင်ထဲကနေရိုက်ချက်, အမှုန်သောပန်းချီကားများတစ်အကွာအဝေးပါဝင်သည်။
'' Madam အတွင်းရေးမှူး '' ဒီရာသီတံခါးဝမှထွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ညာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးဒုံးပျံ-propelled လက်ပစ်ဗုံးတစ်ဦးအဓိကသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခံရဖို့အကြောင်းနည်းတူဘဲဥပုံရုံးထဲမှာပေါကျကှဲအဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပေါက်ကွဲသံကြီးနှင့်အတူကစတင်ခဲ့သည်။ Legion သည့်အကျိုးအပဲ့ထဲကသူတို့ရဲ့နည်းလမ်းရှာပေးဖို့ဒဏ်ရာရရုန်းကန်အဖြစ်အပြီးတွင်၏ပရမ်းပတာမှဖြည့်စွက်, မွမှေုနျ့နှငျ့အပျက်အစီး၏သိပ်သည်းမီးခိုး, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး simulated ။
ဖန်ဆင်းရှင်, စာရေးဆရာနှင့်ဦးခေါင်းထုတ်လုပ်သူ, ဘာဘရာခန်းမရဲ့နိုင်ငံရေးဒရာမာတစ်လျှောက်နှင့်အတူအဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အိုင်ကွန်အထိမ်းအမှတ, အဆောက်အဦးများနှင့်နိုင်ငံ၏မြို့တော်နေရာများကိုပုံတူပွားကြောင်းအစစ်လားထင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှလက်မှုပညာကို Legion of Honour လိုအပ်ဝါရှင်တန်ဒီစီ၌အမြစ်တွယ်နေတဲ့ storyline အတူ New York မှာပစ်ခတ်နေသည် ပြပွဲလိုအပ်ပါတယ်အခြားအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအမျိုးမျိုး။ အိမ်ဖြူတော်၏တစ်ဦးကကွန်ပျူတာ-generated ရိုက်ချက် Pennsylvania ပြည်နယ်ရိပ်သာ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးနှင့်တိုက်ရိုက်-action ကိုရိုက်ကူးနှင့်အတူချောမွေ့စွာထပ်တူပြုပြီးသောလင်ကွန်းသတိရအောက်မေ့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အပန်းဖြေနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဆက်ရေးဖို့အခြေအနေတွေကို enable သောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအကြားရှိပါတယ်။
ဆီးရီးယားလူမျိုး၏ဆင်းရဲဒုက္ခယခုရာသီရဲ့ storyline ဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းရေးမှူးပြည်နယ်၏ဧလိရှဗက် McCord (လက်ဖက်ရည် Leoni) ပြည်နယ်အကြီးအကဲများနှင့်အတူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအတွက်အပေးအယူအကျိုးဆောင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ သူမကသူ့ကို VR ဂိမ်းကိုစွဲလန်းနှစ်သက်တွေ့ရာနည်းပညာကွန်ဖရမှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထွက်ရှာတတ်၏။
Legion ရဲ့အဖွဲ့ပေါက်ကွဲကြောင်းဂြိုလ်သားမိကျောင်းတစ်အလုံးအရင်းတှေအမြားကွီးတစ်ခုလုံးကို CG ကို virtual ဗီဒီယိုဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်, created နှင့်အမျှနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေထုချိုး
အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင် / ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင် VR ဂိမ်း
သူကထက်ထက်သန်သန်သူတို့အပေါ်မှာမီး။ မိမိအစွမ်းဆောင်ရည်ရွေ့လျားပွဲစဉ်, အနုပညာရှင်က၎င်း၏က virtual world အထဲမှာဂိမ်းကစားထားတဲ့ကိုယ်ပွားကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ Real-time အတွက်တွေ့ရှိနေရသည် Looped ပြေးသံသရာနှင့်အပြန်အလှန်အသေခံ animations တွေကို Houdini အတွက် simulated ခဲ့ကြသည်
ပြီးတော့ Redshift အတွက်ပြန်ဆို။
တစ်ဦးကကြာမြင့်စွာထူထောင်ရိုက်ချက်အပူတပြင်းသည်ရှုရိလူရာပေါင်းများစွာခိုလှုံတူရကီနယ်စပ်ရေကြီးမှုနှင့်အတူတစ်ခက်-နှိပ်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အတူပုံပြင်များ၏နှလုံးထဲသို့တိုက်ရိုက်ခုန်, ဇာတ်လမ်းတွဲ 506 များအတွက် '' အအေးပွင့်လင်း '' သည်။ မူလကနယူးယော့ပြည်နယ်, လက်တွေ့ရိုက်ကူးအတွက်အိုးအိမ်မဲ့ယောက်ျား, မိန်းမနှင့်ကလေးများ၏နံပါတ်အားကောင်းရန် VFX Legion အပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ပစ်သတ်။ အဆိုပါစတူဒီယိုရဲ့မှုန်သောပန်းချီဆရာများ, စာစီနှင့် CG အနုပညာရှင်တွေဒုက္ခသည်များ၏ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည် sequence ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေး၏စကေးရောင်ပြန်ဟပ်။
အကြီးစား set ကို sxtension
ထုတ်လုပ်သူများတက် bulking လိုအပ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်သောရေတပ်သင်္ဘောပေါ်မှာလူများ၏အရေအတွက်ကိုကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ, သူတို့ကရိုက်ကူး CGI နှင့်အတူ aligned ကြောင်းသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ချက် directing set ကိုအပေါ်ကို Legion of Honour ရဲ့ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဒါဝိဒ်သည် Isyomin နှင့်အတူဒုတိယယူနစ်ရိုက်ကူးစီစဉ်ထား။ အဆိုတော်များထို့နောက်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းမှထွက် Rotoscoped နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခု၏ဖွဲ့စည်းမှုစဉ်အတွင်းနောက်ထပ်လူတို့နှင့်အတူတလျှောက်, မိုဃ်းကောင်းကင်ကဆက်ပြောသည်။
Legion ဒစ်ဂျစ်တယ်မီး, အပျက်အစီးများနှင့် Houdini အတွက် simulated အခြားဒြပ်စင်များနှင့်နီကာရာဂွာအတွက်သမ္မတနန်းတော်၏ကွန်ပျူတာ-generated ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများ၏သရုပ်မှန်မှဆက်ပြောသည်။ ၎င်း၏အဖွဲ့ကခြစ်ရာကနေအသီးအသီးကိုပစ်ခတ်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, ActionVFX ရဲ့စာကြည့်တိုက်ကနေလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင်တည်ဆောက်
နယ်စပ် treking ခိုလှုံရာ CG ရိုက်ချက်
နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုပူးတွဲတင်ပြထား။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း Redshift အတွက်ပြန်ဆို, Houdini အတွက် simulated နှင့်မာယာအတွက် lit ခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းမှတဆင့်ပျံသန်းမယ့်ကွန်ပျူတာ-generated ကို C-130 Hercules စစ်ဘက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းကိုခေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူနွေးလာမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
တစ်ဦးအပေါ်လိုအပ်သောလြောကျပတျစှာအမည်ရရာသီ၏ဆုံးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု-မောင်းနှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ '' Proxy စစ်ပွဲ, '
ဒါဇင်ရှုပ်ထွေးရိုက်ချက်များ - ကြီးမားသောထား extension ကိုနှင့်ဆီးရီးယားအတွက်ကွန်ပျူတာ-generated စွန့်ပစ်, လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. ထွက်တွေအများကြီးကနေနောက်ခံအတွင်းဖြိုဖျက်အဆောက်အဦးများအတွက်ရပ်တည်ကြောင်းအသေးစိတ်ဆိုရင်တော့ Matte ပန်းချီကားများဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ပဲသက်ရောက်မှုရှေ့တော်၌စပျစ်သီးပြွတ်ဗုံး၏အသံကိုနားထောငျအဖြစ်၎င်းတို့၏ရယ်မောခြင်းကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှလှည့်လာသောအခါဘောလုံးကစားခြင်းကလေးတွေများအတွက် setting ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး CG MiG သို့လေယာဉ်ပျံကနေတဆင့်၏ယူ-off မှတဆင့်လမ်းလျှောက်အရာရှိများနှင့်ဖွင့်လှစ်တစ်ဦးကမြင်ကွင်းတစ်ခု ဂြိုဟ်တု သူတို့စပျစ်သီးပြွတ်ဗုံး drop အဖြစ်နှင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။
'' Madam အတွင်းရေးမှူး '' သူတို့ကအမေရိကန်နယ်စပ်ရောက်ရှိဖို့အဖြစ် Sonoran ကန္တာရမှတဆင့်၎င်းတို့၏ရှည်လျားသောခရီးအဆုံးသတ်တဲ့မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်သူမ၏ငယ်ရွယ် sonas နှင့်အတူဖွင့်လှစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ယနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ထံမှဝမ်းခွဲထားတဲ့ပြဿနာအပေါ်တစ်ဦးအလင်းထွန်းလင်း။ နယ်စပ်ကင်းလှည့်ထံမှအကူအညီများ၏အာမခံခကျြမြားပြီးနောက်အခင်းဖြစ်ပွားရာတစ်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာမှဦးဆောင်မိခင်ရဲ့သားပျဉ်ပြားအဖြစ်အဖမ်းခံရဘတ်စ်ကားနှင့်အတူပိတ်။ အဆိုပါထူထောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်မြုံသဲကန္တာရရှုခင်းနှင့်တစ်ဦးအမေရိကန်အရာရှိတွေကို၏ကားရပ်နားအများကြီး, Legion ရဲ့ Matt ပန်းချီဆရာမာ့ခ် Adamson နှင့်စာစီ Eugene Olsen အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Ruy Delgado ကင်မရာမြင်ကွင်းထဲမှာပွဲစဉ်ရွေ့လျားရှိသမျှတို့ကိုကိုင်တွယ်။
Burbank နှင့်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတွင်အခြေစိုက်, VFX Legion တိုင်းဘတ်ဂျက်ထဲကအများဆုံးရအရည်အသွေးမြင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Episode ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများနှင့်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေပေးအထူးပြု။ စိန်ခေါ်တွေ့ဆုံတစ်ဦးရှေ့ဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကမှာပိုက်လိုင်း, တည်ထောင်သူ, CD, အကြီးတန်း Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူး, ယာကုပ်သည်ဒါဝိဒ် Hattin, နှင့်စတူဒီယိုရဲ့ဝါရင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းယူနစ်အဖြစ် 2013 + ကျွမ်းကျင် VFX အနုပညာရှင်များစုပေါင်းအတူထောက်ခံမှုန်ထမ်းများအလုပ်နှင့်အတူ 80 အတွက်ဖြန့်ချိ မြင့်မားတဲ့ရိုက်ချက်အရေအတွက်နှင့်မျိုးစုံစီမံကိန်းများအတွက်တင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်၏။
Legion ရဲ့အလုပ်တီဗီစီးရီး, ထိုကဲ့သို့သော '' လူသတ်မှုနှင့်အတူ Away Get လုပ်နည်း, 'အဖြစ်' 'Madam အတွင်းရေးမှူး,' '' 'အရှုပ်တော်ပုံကြောင့်' 'suite,' 'အယ်လ် Chapo,' 'မျက်လုံး Candy,' 'တော်လှန်ရေး' နဲ့ 'Gone,' မှပါဝင်သည် အနည်းငယ်အမည်ကို။ '' အပြင်းစားဟင်နရီ, '' ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ 2, '' ထုတ်ပယ်သန့်စင်: ရွေးကောက်ပွဲတစ်နှစ်တာ 'နဲ့' ထုတ်ပယ်သန့်စင်: မင်းမဲ့စရိုက် '' စတူဒီယိုရဲ့ရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်အကြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိတွင် Blumhouse Productions ထဲက feature အသစ်ရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်အလုပ်တက်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကဖြစ်ပါတယ်။ VFX ကို Legion of Honour နှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလည်အပတ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက , [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ် 818.736.5855 ခေါ်ဆိုပါ။
စီမံကိန်း: တီဗီစီးရီး: 'Madam အတွင်းရေးမှူး /' ရာသီ5(CBS)
ဘာဘရာခန်းမ Productions, LA က
ဖြစ်သော CBS ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို
အမြင်ဆိုင်ရာအထူး COMPANY: VFX Legion LA က / ဘီစီ
ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ / VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး: ဂျိမ်းဒါဝိဒ်သည် Hattin
ထုတ်လုပ်မှု၏ VFX ထုတ်လုပ်သူ / ဌာနမှူး: Nate Smalley
တွင်-Set Supervisor VFX: ဒါဝိဒ်သည် Isyomin
တွင်-Set Supervisor VFX: အဲရစ် Pascarelli
VFX အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ: ရိဒ်ဘန်း
CG ကြီးကြပ်ရေးမှူး: Rommel အက်စ် Calderon
CG အကျိုးသက်ရောက်မှုအဆိုတော်: အဲရစ် Ebling
ဒစ်ဂျစ်တယ် Matte ပန်းချီဆရာ: မာ့ခ် Adamson အဲရစ် Mattson
CG အဆိုတော်များ: Trevor ခက်, မာကု Hennessy-Barrett အဲလက်စ် Keller, Bryan Shepperd ခရစ် Strauss
စာစီ: နစ်ခ် Guth, H ကို Haden Hammond ဟာ, Austin Hiser, ခရစ္စတိုဖာ Klassen, Brad Moylan, မီလ်တန် Muller, Eugene Olsen ဒန်က Short, Kyle Spiker
Porsche ရဲ့ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်းများအတွက်ကိုလိုနီသိမ်းသွင်း ထား. နှစ်ဦး Telly ဆုပေးပွဲ - သြဂုတ်လ 13, 2019
VFX ကို Legion of Honour '' နေ MA, 'တစ်ဦးကထိတ်လန့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် Visual Effects တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့ - ဇွန်လ 21, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဖွဲ့စည်းမှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အစိမ်းရောင်ဖန်သားပြင် မက်တီပန်းချီ Extensions Set လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် VFX VFX Legion virtual reality	2019-05-16
နောက်တစ်ခု: လူသတ်သမား '' လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ '' မိတ်ဆက်နယူးထုတ်လုပ်မှုဂီတစီးရီးသီချင်းများ